पोलिथिन झोलाबाट पेट्रोल निकाल्न आँट गरेन स्थानीय तहले – purnakhabar.com
पोलिथिन झोलाबाट पेट्रोल निकाल्न आँट गरेन स्थानीय तहले
काठमाडौँ– पोलिथिन झोलाबाट पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन गर्ने प्रविधि अपनाउन नगरपालिकाले अझै चासो नदेखाए पनि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) ले भने तीन वर्ष अघिदेखि यसमा अध्ययन गर्दै आएको छ । नास्टले देशभरका धेरै स्थानीय सरकारलाई पोलिथिनको व्यवस्थापनका बारेमा कार्यशालामार्फत जानकारी गराउँदै पनि आएको छ । पोलिथिनबाट पेट्रोल निस्कन्छ भनेर पहिलो पटक सुन्दा नौलो मानेर चासो दिए पनि शुरु नै गर्न आँट नगरेको प्रविधि सङ्कायका प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । उनले भने, &l
२ असोज, काठमाडौं । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बाराबाट निर्वाचित राजपा संसाद एकवाल मियाँले भने-निजगढ विमानस्थलका लागि रुख काटिएवापत बारामै रुख रोप्न सकिने १० गुणा बढी जग्गा छ, त्यहाँ रुख रोपौं । निजगढमा जंगल मासेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लागिएको भन्दै एकथरी अभियन्ताले विरोधको गरिरहेको र सरकारले एउटा रुख काट्दा २५ वटा नयाँ रुख रोपिने जवाफ दिइरहेका […]
काठमाडौं । भेट्रान स्ट्राइकर अनिल गुरुङले ८ वर्षपछि थ्रीस्टार क्लबमा फर्किएका छन् । उनले १३ असोजदेखि सुरु हुने ए डिभिजन लिग थ्रीस्टारबाट खेल्ने भएका हुन् । हालै मात्र अन्तराष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिएका अनिल ७ वर्षदेखि मनाङमा थिए । तर, बुधबार थ्रीस्टारको टिमसँग आवद्ध भएका छन् र अभ्यास गरेका छन् । अनिलसँग थ्रीस्टारमा आउने पक्का भएको […]
दशैंको शुभकामना दिँदै के–के भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले ?
Posted on October 16, 2018 Author purnakhabar
काठमाडौं–पूर्वाराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाली जनताले देश बन्ने र बनाइने सपना देखेका भएपनि त्यो पूरा हुन नसकेको बताएका छन् । राजनीतिक परिवर्तनको नाममा समेटिएका असामयिक तथा असान्दर्भिक कार्यसूचीहरुका कारण अहिले देश कसरी बचाउने भन्ने अवस्था आएको पूर्वराजाको दाबी छ । विजया दशमीको अवसरमा एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै शाहले हरेक उपलव्धिहरु परिवर्तन हुने भएपनि हरेक परिवर्तनहरु उपलव्धिमूलक बन्न […]
पारिवारिक–सुखको सात सूत्रः यसो गरे कसो होला ?
आवधिक योजना बनाउन जिल्ला दौडाहामा प्रदेश सरकार